Gbanwee ihu gi ka nke onye amara na MSQRD | Gam akporosis
Ngwa nke oge MSQRD dị ugbu a na gam akporo
N'ezie enyi gị na ekwentị iOS gbara gị ume ka ị see foto gị abụọ wee jiri ngwa a na-akpọ MSQRD ka ị nwee ike ịgbanwe ụfọdụ atụmatụ nke ihu gị dịka anya. Nsonaazụ bụ foto na-atọ ọchị nke anyị nwere ike ịgbanwe anya anyị na nke enyi ma ọ bụ nwaa iji dochie anya nke nna anyị wee chee etu anyị ga-adị mgbe anyị mere okenye. Ngwa anyị nwere na gam akporo maka ụbọchị ole na ole.
MSQRD dị ugbu a otu n'ime ngwa ngwa nje ma ọ bụ omume nke oge ahụ na nke ahụ n'ezie site na usoro iheomume nke Facebook gị ma ọ bụ ụfọdụ netwọkụ mmekọrịta ị ga-ahụla ka ndị enyi gị gbanwere ihu ha ma ọ bụ bụrụ oke mmanụ nwere ihu anụmanụ. Anyị nwere ya dị na android mgbe emefu oge na iOS na-ezé anyị ezé ogologo n'ihi chọrọ inwe ya na anyị na ngwaọrụ. MSQRD na-eji teknụzụ amata ihu ọma dị elu nke na-enye ndị ọrụ ohere ịgbanwe ọdịdị ha nwere ihe oyiyi na ụdị dị iche iche.
1 Buru onye amara ma obu enyi gi
2 Ngwa ejiji
Buru onye amara ma obu enyi gi
Ọ bụ na-adịbeghị anya izu na anyị hụrụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe oyiyi jupụta netwọk mmekọrịta na ngwa ngwa ozi na-egosi ihu ọchị nke ndị enyi anyị site na ịgwakọta nke onye òtù ọlụlụ ya ma ọ bụ otu nwa nwanne nna ahụ si bụrụ onye ama ama dịka Robert Downey JR. Ngwa iji chịa ọchị ma soro ndị enyi anyị nwee ọ whenụ mgbe anyị na-apụ oriri na nkwari ma ọ bụ zute ha ka anyị nwee beers.
MSQRD nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke masks mebere na gbanwee atụmatụ gị na nke ndị omeewu ama ama, ndị a ma ama na ọbụna anụmanụ ma ọ bụ ihe nkiri nkiri dị ka mmadụ efu. A na-eme mgbanwe a n’akwụsịghị ndekọ ma na-ebugharị egbugbere ọnụ iji zipu ozi, gwa egwuregwu ma ọ bụ hapụ ihe dị egwu ka ọchị wee bụrụ nke kachasị ukwuu na otu nkata WhatsApp ma ọ bụ Telegram.
Na gam akporo maka ugbu a dị n'ụdị beta na ọ na-anọgide a obere nke mere na ị nwere niile nhọrọ na pụrụ ịchọta na iOS otu. Ma ọ dịkarịa ala, anyị enwetala ya ebe a, yabụ na mmelite ole na ole anyị nwere ike nweta ọtụtụ n'ime ya. Ka o sina dị, ị nwere ihe nkpuchi ole na ole ị ga-eji menye ndị ezinụlọ gị ụjọ ma ọ bụrụ na ị see ezigbo foto.
Mgbe ịmalite ngwa ị nwere igwefoto n'ihu nke ọnụ ka ihu gị gosipụta na ihe ndu nke n’eme ka anyi tinye nkpuchi ahu nke oma iji nweta mmetụta kacha mma. Oge ị nwere ihu, etinyere ihe nkpuchi ahụ iji nwee ike ịhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ dịka orangutan, Barack Obama, gbanwee ya na anụ ọhịa ma ọ bụ tiger, ọbụlagodi ka anyị tọrọ. Apụghị m ịhapụ uche onye kacha nso ịbụ zombie ma ọ bụ ihe dịka eserese ọchị dịtụtụ iche.
Ozugbo ahọpụtara ihe nkpuchi, anyị nwere naanị mee obere vidiyo ma ọ bụ were foto nyefee ya ozugbo na Facebook, Instagram ma ọ bụ netwọk mmekọrịta ma ọ bụ ngwa ọzọ. Anyị nwere bọtịnụ abụọ na ala iji were vidiyo ma ọ bụ foto ahụ, na na vidiyo nhọrọ a na-ejedebe oge na otu nkeji. MSQRD nwekwara nhọrọ iji gbanwee gaa na igwefoto azụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme vidiyo maka otu onye ọrụ.
N'ikpeazụ, nke a bụ MSQRD. Nje virus nke oge na ihe ka kwesiri ka emelite ya nke oma na gam akporo na-nso ka nke iOS. O sitere na peeji ahu n'onwe ya bu nke esi eme ka amara ya na odi na onodu beta na o ghazie idozi ujo na ufodu imeghari na adighi aru nke oma. Ọnụ ọgụgụ skins dị na ngwa a ga-agbasawanye, ebe ọ bụ na n'oge a anyị nwere naanị ole na ole.
Ngwa bụ dị n'efu site na Storelọ Ahịa Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa nke oge MSQRD dị ugbu a na gam akporo
Eprel 6 bụ ụbọchị echere maka mwepụta nke Huawei P9